IIMBONO EZINGAMA-43 ZESKYRIM TATTOO [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA] - UHLOBO
Iimbono ezingama-43 zeSkyrim Tattoo [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Ukuthatha utolo uye emadolweni kuphakathi kwemingcipheko emikhulu ayenzayo xa umntu eqala ukukhangela eSkyrim. Nangona kunjalo, ukuthatha i-inki emadolweni yenye yeendlela zokukhumbula iihambo zakho ezininzi kwi-Skyrim kwindalo yonke ye-IRL.
I-Skyrim iyinto entle, inemifanekiso ekhuthazayo, uyilo kunye neesimboli zokufumana ukhuthazo kwi tattoo yakho elandelayo.
Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa ulwimi lwenamba olufihlakeleyo ukufihla umyalezo, ukuzinika itattoo yesizwe somdlalo, okanye ukusebenzisa isithuba sedolo onokuthi ungasihoyi ngesalathiso se-meme, iiTattoo zeSkyrim zinokuya kwindalo enomdla yemikhombandlela. Ngapha koko, uninzi lunokuba nexesha elinzima lokukhetha inqaku elinye lomdlalo ukumela ngohlobo lobugcisa bomzimba.
Zonke iimpahla ezimhlophe zabesilisa
Imifanekiso emininzi ye-icon evela kumdlalo iguqulwe ngesandla ukuba ibe ziitatoo ezineklasikhi, enzima, ndizibonile izinto vibe. Isalathiso esicacisiweyo somdlalo wevidiyo siza kulahleka kwabo bangakhange bazibhaptize kwilizwe laseSkyrim, kodwa oku akuphazamisi kwimiboniso emihle yobugcisa abanokuba kunye nomzobi we tattoo ofanelekileyo.
Oku kuthetha ukuba nabahlobo bakho kunye nosapho abangenalo nofifi malunga nokuzonwabisa kwakho kwilizwe eliyinyani baya kuba nakho ukonwabela ubuhle be tattoo yakho.
1. Iimpawu zeQuirky Skyrim
-U-Alex Mayhem Graham kwi-Mayhem Tattoos
Ufanele uthande izikhombisi kutolo oluya edolweni, isililo esithandwayo sokubamba kunye nokunyamezeleka okuvela kumdlalo wevidiyo Umdala uScrolls V: Skyrim. Ukuyifaka i-inki kukuhamba kwenqanaba lomphathi, kwangoko kukubeka njenge fan ebonakalayo yelungelo lokuthengisa. Ubuchule bokutyala imali kwezi tatto bukhulu kakhulu, nokuba ngaba yimbonakalo yohlobo lwe tattoo yaseMelika yesikrweqe okanye ukusetyenziswa komgca wenaliti omnyama omnyama ekudaleni umphumo wamatye aqhekekileyo okanye i-inki elula, enesibindi.
2. I-inki yeSkyrim emnyama emnyama
Kukho inqanaba elikhethekileyo leenkcukacha ezixhonywe kwezi tattoos zibalaseleyo zemveli nezimvi. Banikezela umahluko ogqwesileyo ngokuphumeza isitayile seklasikhi kwishading yangasemva, ngamandla kunye nokuzimela kweenkcukacha ezintle ezithunyelwe kwizixhobo zomkhosi nakwizixhobo. Ukusetyenziswa kwe indawo engalunganga isebenza kakuhle ukubonelela ngenkungu kunye nemiphumo yokutshaya, ukukhulula ubumnyama kwiskimu sombala.
3. I-Skyrim iyabaleka
Ezi runes zimele ulwimi lwenamba olusetyenziswa kakhulu kwiSkyrim. Kanye nje ngeelwimi ezahlukeneyo zokwenyani, ezi tatto zinika ithuba lokulinganisela okupholileyo phakathi kwe-inki emnyama kunye nokubekwa ngobuchule.
La maqhawe amaesile amabi asisiseko seSkyrim. Ukhetha ukuba ngomnye waba balwi emva koko uye apho kwi-1000 eyahlukeneyo. Ndiyayithanda indlela ezi tattoos eziyamkela ngayo imithombo yolwazi etyebileyo. Kukho iitatto ezimnyama ezijolise kubomnyama, ngokwesiko zenze umthi iziqwenga zomlo omkhulu, okanye isicelo sokufota somzobo ocingayo. Into ababelana ngayo bonke kukuqonda okuhle kwendawo, umgca, umahluko kunye nokubekwa, ngelixa kusenziwa ukufana okuqinileyo kubalinganiswa kumdlalo.
5. Iibhloko zeSkyrim
Ukuyila, ukukhula, kunye nokubonisa indawo yokugcina izixhobo kunye nezixhobo ziyinto eyonwabisayo kumdlalo weSkyrim. Unokwakha izindlu ezinkulu zokubonisa i-cache yakho yempango. Iitattoos ezingasentla zizisa ezinye kwezi zinto ebomini ngokubuyisela izinto zabo-kwiglasi, i-ebony, i-dragonscale, i-Elven fashioning, okanye intsimbi elula. Uhlobo lwebhleyidi eyenziweyo lithetha ithuba elihle kumagcisa ukuba asebenzise ukuhambisa umbala, umbala, kunye nomsebenzi womnxeba ngendlela yomibini itattoo kunye neyokuzalwa kumdlalo wevidiyo.
6. Iitattoo zobuzalwana obumnyama
umthi wobomi yin yang tattoo
Ubuzalwana obumnyama yinkolo yababulali abanesithunzi abenza iyelenqe eliphambili lomdlalo kumdlalo weSkyrim. Zimele i-sneakier, shadier, kunye nezinye izinto zegazi zeSkyrim, ke kunjalo lukhetho oluthandwayo lokumakwa. Kukho imifanekiso engendawo ekho kule ingqokelela. Ukusuka kwizandla ezibomvu ezinegazi, ukuya kwiiyantlukwano ze Imveli yaseMelika ukakayi kunye neengceba zamakrele, ezi tattoo zibonisa ubumnyama nokufa okunxulunyaniswa nombutho wombulali.
7. I-inki yelogo yeSkyrim
I-logo yeSkyrim ngumfanekiso oguqukayo kakhulu wokusetyenziswa kumvambo. Ngokufana neempawu kwimidlalo enje nge Witcher okanye Imida , zinokusetyenziselwa ubugcisa obuqinileyo ngohlobo lwembala, ukwenza umthunzi, okanye ubuchule bokutsala obungabonakali. Ndiyayonwabela indawo engalunganga, kunye neempawu ezimnyama / ezimhlophe ze-inki zongezwa kwi-sigil yedragoni ukubanika iimpawu ezizodwa kunye ne-pop ngakumbi ngokuchasene nemibala emnyama okanye engwevu, ngelixa abanye bekhetha ukusetyenziswa okufihlakeleyo kwesithunzi kudityaniswe nemigca emnyama emnyama.
8. Iitattoo zenamba yeskyrim
Ezi dragons zeSkyrim ziyamangalisa, zibonisa ubuqaqawuli bokwenyani ekubonakaliseni izidalwa njengoko zibonakala ngaphakathi komdlalo. Uninzi lwamagcisa kwimizekelo engentla agxile ekudaleni kwakhona izikali zenamba, esebenzisa ubumnyama obusebenzayo obudibeneyo ngokudibanisa ne-inki emhlophe okanye indawo engalunganga yokwenza iinkcukacha ezichaseneyo. Kumdlalo, izikali kunye neplate zinokuqokelelwa kubabuleweyo Iidragons ukwakha isikrweqe, ngenxa yoko sisebenzisa eli nqaku njengesiseko se-epic dragon tattoos ngumqondo osebenzayo. Ndiyayithanda indlela ezinye zezi ziqwenga ezongeza ngayo kwiidragons ngokulwa okanye indawo eyoyikisayo yokuchaphazela indawo enkulu ye tattoo kunye nokwenza ubugcisa obuninzi ngokuhambisa okuhambileyo, umsebenzi wecala lomgca kunye neepateni zombala / zomthunzi
Iimpawu zeSkyrim tattoos
Ithetha ntoni ilogo yeSkyrim?
I-logo enesitayile senamba yabadala Imisongo V: I-Skyrim luphawu olubizwa ngokuba litywina lika-Akatosh. Ngumfuziselo woMkhosi Wasebukhosini, umkhosi ophambili oxhobileyo woBukhosi baseTamriel. Inxalenye ephambili yomgca webali lomdlalo imingxunya yoBukhosi ngokuchasene nabantu bomthonyama baseSkyrim, iiNords, ezikhokelwa ngurhulumente onamandla kunye nohlaziyo u-Ulfirc Stormcloak.
Isitywina sika-Akatosh sesothixo oyintloko wama-Divines, uAkatosh. Umsebenzi wakhe wokukhusela uBukhosi. UAkatosh nguThixo weXesha leXesha, kwaye uyinxalenye yelizwe lenkolo elenziwe eSkyrim kwaye likhonjwe ngabemi abaninzi baseSkyrim.
Ngaba ungumthandi weetattoos kunye nemidlalo yevidiyo? Jonga amakhonkco angezantsi ngamanye amabali kunye neegalari:
Iimpawu zeTattoos zoMdlalo weVidiyo ezili-100
IiTattoos zeBorderlands ezingama-50
IiTattoos zama-Witcher ezingama-60
izimvo zokulala ezingwevu nezaselwandle
imibono yokuhamba emnyango ongaphambili
Iithayile foyer kutshintsho lomthi
eyona ndawo iphezulu ngaphezu kwephuli yomhlaba
I-lotion efanelekileyo ye tattoo entsha